W.T: Siyaad Maxamuud Muuse
Siyaad Maxamuud Muuse
Maansadan la magac baxday Dareenka Bulshada , waxaa Curiyay Abwaan Siyaad Maxamuud Muuse oo deggan waddanka South-Africa ( Koofur-Afrika). Maansadu waxay ku soo biirtay taxanaha Suugaanta Doodwanaag 19-12-2004, waana maansadii 28aad ee silsiladda
Abwaanku wuxuu soo tabinayaa dareenka bulshada wanaag-doonka ah ee jecel in ay dib u arkaan sharaftii iyo cisigii ay Ummadda Soomaaliyeed ku lahayd dunidan guudkeeda. Maansadu waxay cabiraysaa in ay dadka wanaagdoonka ahi ka qanceen colaadaha iyo dagaallada sokeeye ee aan ujeedda lahayn.
Abwaanku wuxuu iswaydiinayaa waxa helay ee ay kaalintoodii u bannaantahay indheergaradkii ummadda, wuxuuna si gaar ah u dhalliilayaa dhallinyarada maanta oo uu u arko kuwo kaallintoodii ka gaabiyay, iyagoo doorwayn ku leh dhibka soo gaaray dadkii Soomaaliyeed. Waxayna maansadu dhallinyarada ugu baaqaysaa in ay la yimaaddaan dadaal, isku-duubni iyo wax qabad, ayna dhexda u xirtaan sidii ay ummadooda uga badbaadin lahaayeen dabar-go’idda ay maanta qarka u saaranyihiin.
Haddaan nahay dadwayanaha
Daacad iyo sinnaaniyo
Diintoo la raaciyo
Umaddoo daryeel iyo
Hesha dawlad caadilo
Dalkoodii ka curatiyo
Laga duubay dunidaan
Oo dib loo qotomiyoo
Hadba dacal u ruxayaan
Dusha oogu maran tahay
Dugsi iyo gabbaadiyo
Dayr noqoto Maandeeq
Lagu diirsadoo wacan .
Haddaan nahay dadwaynaha
Dareenkii bulshada sida
Isku duubanee raba
Dadaal iyo wax-qabad iyo
Dardar inay sameeyaan
Dhakhso inay u doonaan
Dib inay u raadshaan
Walaalihii la kala dilay
Isku diray danaystuhu
Durba inay heshiiyaan
Dawlad ay samaystaan .
Haddaan nahay dadweynaha
Wixii horay u daashaday
Wixii horey u soo dagay
Wixii horey u soo dilay
Diidnay ay yidhaahdaan
Danta ay ka raacaan
Dilka iyo dagaalkiyo
Colaaddaan damayn iyo
Dabkan laysku haystee
Laysku wada dilaayee
Dukum daakum naga dhigay
Dalkeenii sidaan yiri
Ku le’deen dadkeenii
Naga yeelay digadiyo
Dayday iyo sabooliyo
Duruufuhu ku ciilaan!
Hadaan nahay dadwaynaha
Digniin waxaan u diraynaa
Isku diraha ummadiyo
Daba dhilifka gaalada
Doolar qaate nacasiyo
Dagaal-ooge oo idil
Dadka ay ku haayaan
Waa inayska daayaan
Dacal ooga baydhaan
Dariiqay ku joogaan
Waxaan dood ku leennahay
Aqoonyahanka dadan iyo
Waxa ay u dayaceen
Ficil daa warkiisee
Dibnahoodii waxa xiray
Marna ay u diirayn
Dhibka noogu daayeen
Bal jawaab wax deeqdiyo
Dawgaa ha sheegeen ?
Midh yaroo dardaarana
Dhallintaan u diraynaa
Gaalada ku dayanee
Dalkii looga baahnaa
Ka diimoon dhibkiisee
Damqashadii ka suushoo
Baryid mooda darajada
Daydayi waxaan jirin
Ragii dumar ha laga dhigo
Diin laawayaasha ah
Durduradu ma fiicnee
Haddii uu damiir jiro
Daliilkay ku raaceen
Ama ay ku doorteen
Dufan laysi siiyiyo
Doollarka suntaa iyo
Dersi kale miduu yahay
Dadka how caddeeyeen!
War bal degelladii daya!
Diiftaa ku taallaa
Idinkoo is doontoo
Isku duuban oo mida
Maad xummaati diiddaan
Dadaal maad billowdaan
Danyar ugu adeegtaan
Dhismaha Dowlad Qarannimo
Maad ku soo dabaashaan?
Mid kaloo dardaraana
Isku duubni wadartiis
Shacabkaan u diraynaa:
War bal daya Soomaalaay
Dahabka iyo Luulkiyo
Dheemanku dul yaallee
Duunyadu ku nooshee
Biyihii ka daadana
Beeraha ku daacaan
Oon hoosba loo dayin.
Lagu soo dabayn iyo
Gaajada na dubatiyo
Badda deeqahaa yaal!
Darajuu na siiyoo
Daa’in noo gargaaryaye
Dibadaha u dhoof iyo
Dawarasigu ma sharaf baa
Mise waa dabbaalnimo?
Intaas oo is daba-taal
Hadii laysku wada daro
Oo daaha loo rogo
Daacad loo habeeyo
Degganaan la kaashado
Miyaan lagu dagaynoo
Aan lagu dawoobayn ?
Dakhligaa ka soobaxa
Miyuu gaajo dayrayn ?
Ama uu na deeqayn
Oon dharag la daacayn ?
Darartiisa oo qudha
Dad baan oogu horreynaa .
Waxan ugu dambayntii
Dabuub kale ku leennahay
Noo sheega Dastuurkiyo
Nidaamkay ku dagi layd
Daran doori weeyee
Dooddaasi noo furan
Daa’im Hayna garab galo.